Mutungamiriri wenyikaVaEmerson Mnangagwa, avo vari ku Davos, Swirtzerland, kumusangano we World Economic Forum (WEF), nhasi vatungamira musangano weFriends of African Continental Free Trade Area.
VaMnangagwa vange vaine vamwe nevatungamiri venyika dzemuAfrica vanoti VaPaul Kagame veRwanda, VaLazarus Chakwera vekuMalawi uye VaHage Geingob vekuNamibia.
Musangano uyu waitwa pakudya kwemangwanani nevatungamiriri venyika dzakasiyana siyana, vakuru vemasangano akazvimiririria, vakuru vemakambani nevanobata zvigaro zvemasangano makuru epasi rese.
Gurukota rinoona nezvemaindasitiri Amai Sekai Nzenza vanoti Zimbabwe ine chivimbo chekuti ichakwanisa kukwezva vemabhizimisi vekunze kuti vazouchika mari munyika.
Asi nyanzvi munyaya dzezvehupfumi vachishanda nesangano reThe Economists Zimbabwe, VaGideon Mabhunu havaone paine chinobuda kumusangano uyu vachiti nyika inofanora kutanga yagadzirisa mumusha isati yaenda kunze.
Izvi zvatsinhirwa neimwe nyanzvi munyaya dzezvemabhizimisi vari mukuru wesangano reCEO Round Table Zimbabwe VaKipson Gundani vatiwo nyaya dzezvirango zvakatemerwa vatungamiri venyika zvinopa kuti kukwezva vekunze kunetse.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhizimisi, vari mukuru we sangano reZimbabwe Institute of Directors, Doctor Proctor Nyemba vanoti shuviro ye mabhizimisi ndeyekuti pabude chinobatika mukupera kwemusangano uyu.
Vemapato anopikisa nedzimwe nyanzvi munyaya dzezvehupfumi vari kuti musangano uyu uchatosiya Zimbabwe yanyura muzvikwereti nekuti wose anoenda kumusangano weWorld Economic Forum anofanira kubhadhara mari inosvika zviuru gumi nemakumi mapfumbamwe kana kuti 19 000 US Dollars.
Mutungamiri wenyika nechikwata chake vari kunzwiwo vari kubhadhara mari inosvika zviuru makumi matatu zvemadhora ekuAmerica paawa kana kuti 30 000 per hour pakuhaya ndege.